Zvakanakira kushandisa masocial network kune iyo Ecommerce yebhizinesi rako | ECommerce nhau
Susana Maria Urbano Mateos | | eCommerce, Chengetedzo
Nzvimbo dzezvemagariro dzinopa mukana wakanaka kune rako bhizinesi e-commerce inogona kuwedzera yako vatengi base, dzidza zvakawanda nezve maitiro avo ekutenga uye zvakare kuunza kuvimbika. Tevere isu tichataura nezve zvakanakira shandisa masocial network kune ecommerce yebhizinesi rako.
El kushandiswa kwenzvimbo dzekudyidzana inokutendera iwe kuwedzera yako mutengi base nekuvaka inowanikwa online. Kwete izvozvo chete, mishandirapamwe yako yekushambadzira inogona kusanganisira vateereri vateereri vausingakwanise kusvika kuburikidza kushambadzira kwemuno.
Chimwe chei zvakanakira social network ecommerce ndeyekuti iwe unogona kushandisa kuvepo kwechiratidzo chako kuitira kuti vatengi vako nevateveri vako vazive kuti bhizinesi rako nderei. Uye kana iwe ukavapa iwo makuru ezvinyorwa, vateveri vako vanowanzo govana izvo chako chiratidzo chinopa neshamwari uye nemhuri. Mune mamwe mazwi, pasocial media inopa bhizinesi rako kuti riwedzere kuoneka.
Shandisai pasocial network zvinogona zvakare kushandiswa kuzivisa kushambadza uye zvakakosha zvipoUye zvakare, iwe unogona kushandisa zvemukati zvemukati kuti vateereri vako vazive zvakawanda nezverutivi rwemunhu bhurandi rako. Ndokunge, zvemukati zvinogona kukubatsira iwe kugadzira kubatana neako anogona vatengi, wedzera yako yevatengi base uye zvakare kuvimbika kune yako brand.
El Ecommerce inogona zvakare kubatsirwa kubva pasocial media kubva mukutora chikamu uye kudyidzana kwevatengi. Aya masocial network anotendera iwe kuti utaure, mazano, zvikumbiro uye ugovane kusahadzika nezve bhizinesi rako. Izvi zvinogona kukubatsira iwe kuti uwane chete rudzi rwechigadzirwa chaunogona kutsvaga vatengi vari kutsvaga.
Kuburikidza ne vezvenhau vezvenhau vanogona kunanga chaiwo madhimoni tarisiro kuitira kuti zvigadzirwa zvinyatsoratidzwa kune vateereri vamuri kunongedza. Nekutarisa rakanangana neboka revangangove vatengi, iwe unogona kuwana zvakanyanya kubva pane yako yekushambadzira Investment.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Chengetedzo » Zvakanakira kushandisa masocial network kune iyo Ecommerce yebhizinesi rako
Chii chinonzi basa redhijitari wekushambadzira maneja chine?